मिटरब्याजी विजय : एक लाखको ३ वर्षमा १२ लाख अशुले, अझै पैसा तिर्न गरिबलाई धम्काउँदै – Dainik Sangalo
मिटरब्याजी विजय : एक लाखको ३ वर्षमा १२ लाख अशुले, अझै पैसा तिर्न गरिबलाई धम्काउँदै
November 9, 2020 114
जनकपुरधाम, कार्तिक २४ गते । जेठ २०७४ मा महोत्तरीको औरही नगरपालिका–२, मुसहरी टोलकी ३५ वर्षीया उर्मिला देवी सदा घरायसी कामकाजको लागि ऋणको खोजीमा थिइन्। आर्थिक विपन्नताको कारण गाउँघरका साहु महाजन कहाँ हार–गुहार गर्दा समेत ऋण कतै ऋण पाइनन्। औरहीमै सञ्चालित साझा लघुवित्त सहकारीमा मासिक रुपमा केही रकम जम्मा गर्ने गरेकीले उर्मिलाले त्यहाँ पनि ऋण मागको प्रस्ताव गरिन्। संस्थाले इन्कार गर्यो।
सहकारीमा ऋण माग्न पुगेकी उनलाई त्यहीँ कार्यरत विजय चौधरीले आफूले व्यक्तिगत ऋण लगानी गर्ने गरेको कुरा सुनाए। तर ‘बजारको हजार’ ब्याजदरमा। अर्थात ५० हजार ऋणमा औरहीमा प्रत्येक शुक्रबार र मंगलबार लाग्ने हरेक बजारको एक हजार रुपैँया ऋण तिर्नुपर्ने। बाध्य भएर उर्मिला घरको जोहो टार्न चौधरीसँग ५० हजार ऋण लिइन्।
चौधरी विगत पाँच वर्षदेखि बजारको हजार ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने औरही बजारका नामुद मिटरब्याजी हुन्।
उर्मिलालाई ५० हजार रुपैँया ऋणको महिनामा आठ हजार रुपैँया ब्याज तिनुपर्ने भयो। कतैबाट पैसाको आम्दानी थिएन। तापनि उर्मिलाले मासिक रुपमा ६ हजार रुपैँया चौधरीलाई ब्याज बुझाउन थालिन्।
ऋण लिएको ६ महिना नबित्दै उनका श्रीमान् वीरे सदा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने टुंगो लाग्यो। पतिलाई विदेश पठाउन उर्मिला फेरि गाउँकै साहु महाजन चाहारिन्। तर, कतै ऋण पाइनन्। बाध्य भएर दोश्रो पटक पनि उनी मिटरब्याजी चौधरीसँगै ऋण लिन विवश भइन्।
चौधरीसित फेरि ५० हजार रुपैँया ऋण लिइन्। अन्यत्र पनि जोहो गरेर श्रीमानलाई मलेसिया उडाइन्। कम्पनीमा काम चल्न थालेपछि वीरेले पठाएको रकमबाट उर्मिलाले तीन महिनामै चौधरीको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिदिएको बताइन्।
मिटर ब्याजी चौधरीलाई ५६ हजार रुपैँया तिरिसकेपछि उर्मिलाले मासिक सयकडा ३ प्रतिशतले ब्याज लिन आग्रह गरिन्। तर, चौधरीले भने बजार सिस्टममै ब्याजसहित साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने अडान कायमै राखे। चौधरी ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्न पटक–पटक दबाब दिन थाले।
बजारको हजार ब्याज अनुसार कमाएर मात्र धेरै पैसा तिर्न नसक्ने देखेपछि उर्मिलाले संस्थाबाट एकलाख रुपैयाँ ऋण निकाल्न सहयोग गरिदिन चौधरीलाई नै आग्रह गरिन्। चौधरीले उनलाई १ लाख रुपैँया ऋण झिक्न सहयोग गरे। उनले संस्थाबाट लिएकी एक लाख ऋण तत्कालै हिसाब गरी चौधरीरलाई नै बुझाइदिइन्। तर धूर्त चौधरीले अझै एकलाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्दै उल्टै उर्मिलासँग कपाली तम्सुकमा औंठाछाप गराए।
‘मैले सहकारीबाट एक लाख निकालेर तत्कालै विजयको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरिदिएँ। तर, उनले उल्टै मेरो पैसा अझै एकलाख बाँकी छ भनेर सहकारीमै जबरजस्ती मसँग सही छाप गराए’ उर्मिलाले भनिन्, ‘किन यो तम्सकुकमा औँठाछाप गराएको सोधेपछि विजयले भन्यो ममाथि विश्वास छैन ? अहिले त्यहीँ कपाली तमसुकले हामीलाई चौधरीले बर्बाद गर्दैछन्।’
उर्मिलाले त्यसयता पटक–पटक गरी साढे चार लाख बढी रुपैयाँ चौधरीलाई तिरिदिइन्। तर, त्यो कपाली तमसुक अझै सुदखोर चौधरीले उनलाई दिएका छैनन्। अन्त्यमा साढे ७ लाख रुपैयाँ साँवासहित ब्याज बाँकी भएको भनेर तिर्न फेरी पटक–पटक सुदखोर चौधरीले धम्की दिन थाले।
अन्ततः झण्डै एक वर्षअघि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उर्मिलाको घर छेउमा सासू रामो सदाको नाममा रहेको १७ धुर घडेरी नै चौधरीको नाउमा रजिस्टरी पास गरिदिइन्। तर तमसुक अझै मिटरब्याजी चौधरीकै सन्दुकमा रहेको उर्मिलाले दुखेसो पोखिन्।
उर्मिलाकी जेठानी लीलादेवी सदाका अनुसार चौधरीले घडेरी रजिस्टरी गराउन जाँदा नै कपाली तमसुक दिन्छु भनेका थिए। तर, घडेरी पास गरिदिएपछि मालपोत कार्यालयमै तमसुक माग्दा बिजयले घरमै बिर्सेको र घरमै फर्केर दिन्छु भनेका थिए। ‘घर आएर माग्दा एक लाख रुपैयाँ अझै बाँकी छ भन्यो। त्यो बेलादेखि तमसुक दिएको छैन। उल्टै पैसा माग्दैछ’, लीलाले भनिन्, ‘रजिस्टरीमा पनि मेरै १७ हजार रुपैयाँ खर्च गराइदियो। विजय महा बेइमान र कपटी छन्।’
विजयले ब्याजको स्याज गरी उर्मिलाबाट साढे ४ लाख रुपैयाँ र साढे ७ लाखको घडेरी लेखाए पनि उनलाई पैसाको लागि दबाब दिन छाडेका छैनन्। ‘अझै पनि बीचबीचमा मसँग पैसा मागिरहन्छन्। म जस्ता गरिबले कहाँबाट पैसा तिर्ने। मेरो भागको भएको घडेरी पनि उसलाई नै दिए’ उर्मिलाले गुनासो गरिन्। चौधरीको बेइमानी धन्धाले सदाका परिवार तनाबमा छन्। उर्मिलाले झण्डै डेढ महिनाअघि इलाका प्रहरी कायार्यलय गौशालामा मिटरब्याजी चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। तर, प्रहरीले उजुरी लिए पनि दर्ता गरेको छैन।
उर्मिलाले भनिन्, ‘मैले विजयविरुद्ध उजुरी दिएकी थिएँ। प्रहरीले उजुरी लियो तर दर्ता गरेन। हामी जस्ता पीडितले न्याय कहाँ पाउनुर ?’ ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मीले उजुरी आएको तर जिल्लाले नै विजय चौधरीको घटना हेर्ने गरेको कारण जिल्लामै जान सल्लाह दिएको बताए।
‘सुरुदेखि विजय चौधरीको मिटरब्याज सम्बन्धी घटना जिल्लाले हेर्दैछ। त्यसैले मैले पीडितलाई जिल्लामै उजुरी दिन सल्लाह दिएको थिएँ। दोहर्याएर पीडितहरु आएनन्’ निरीक्षक रेग्मीले भने, ‘फेरि पनि पीडितहरु आएर उजुरी दिए हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’ टुडेपाटीबाट
Prevअटो चलाएरै सन्तानलाई डाक्टर बनाउन सफल कञ्चनपुरकी गोमा
Nextभाग्य चम्किएपछि दुबईमा ११ करोडको चिट्ठा जिते !
भैँसी बचाउन जाँदा पहिरोमा पुरिएर १ जनाको मृत्यु
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43693)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43551)